Ahoana no hanaovana drafitra A nankany Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana no hanaovana drafitra A nankany Eoropa
(Last Nohavaozina: 07/08/2020)
Rehefa manomana ny diany ho any Eoropa, ianao miatrika safidy maro! toerana tsy misy farany sy ny zavatra niainany, that you could travel for years and still feel like you’ve missed something essential. This can lead to making the mistake of over-committing, sy tsy hita teo amin'ny antsipiriany kely izay mahatonga Travel sy ny fiaran-dalamby mandeha tena mahagaga. Eto izahay mba hilaza aminao izay tsy tokony hatao, ary ahoana ny hanaovana drafitra ny nankany Eoropa, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany!
Soso-kevitra 1: Tery Ny Down
Alohan'ny afaka mahatsapa marina espaniola Tapas, piazzas any Roma, na tampon-trano tanan-tohatra ao Prague, manan-danja kely ny Admin dia takiana! Raha tsorina, dia vao mainka vonona ianao rehefa manomana ny diany ho any Eoropa, ny lehibe kokoa ny mety ny mahafinaritra sy ny adin-tsaina-maimaim-poana izay velona diany ho any ny fanantenanao.
Ka eto dia Hamonjy Ny Fiaran-dalamby soso-kevitra: mifidy ny ambony dimy, tsy maintsy-de los fa Eoropeana traikefa nahafinaritra! Angamba&#8217;s misotro ao amin'ny Hofbrauhaus in Munich, na naka ny lakandrano fitsidihana amin'ny Amsterdam, na fandinihana David-tsy fijery maro – in Florence. Na inona na inona no, marika ireo izy ary drafitra ny diany manodidina azy. Tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby.
Prague to Berlin tapakila fiaran-dalamby
Frankfurt mankany Munich lamasinina tapakila
Soso-kevitra 2: Aza tsy ny cliches.
Ary isika efa naorina fa mila manomana ny nankany Eoropa, Ny manaraka dia misafidy ny toerana ambony. Ao amin'ny Fanahy ny YOLO, dia azonao atao ny mandeha eny ny nokapohina sy mitady làlana harena miafina ao anatin'ny tanàna. Fa ny hipster ao aminareo no te handeha hiady amin'ny toerana mahazatra, atao ny maka toerana. Ny fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny mpizaha tany. Misy antony mahatonga toerana toy ny ny Colisée, ny Tour Eiffel, ary Charles Bridge are all tena malaza amin'ny mpizaha tany: ry zareo awesome! Aza mahatsapa fa mila ianao eny amin'ny lalana voadaroka izany fotsiny. Raha toa ka lehibe attractions hahaliana ny anao, dia mandeha hizaha azy ireo.
Ny famantarana iray ihany, Tsy mitsabo ny boky torolalana ho toy ny filazantsara. Mety hilaza ny Louvre tanteraka dia tsy maintsy-manao amin'ny nankany Paris, but maybe you’d have a better day searching for Blek Le Voalavo pieces on alley walls. manovaova, rehefa mandeha, dia manan-danja, foana!
London ho Frankfurt Lamasinina
London mankany Cologne fiaran-dalamby tapakila
London mankany Brussels Train ticket
Soso-kevitra 3: Travel dates are crucial when you plan a trip to Europe
Travel ao amin'ny eny fotoana. Popular volana no Jolay, Aogositra, ary Septambra. Insanely be atao izy ireo, tsy lazaina intsony lafo! Raha mikasa ny nankany Eoropa in Summer, ianao no mizara traikefa tsirairay amin'ny an-tapitrisa sy ny an-tapitrisany maro ny namana akaiky indrindra. Accommodation dia namandrika avy, na lafo sy ny Lamasinina dia ho feno kokoa, satria izy ireo ny fomba tsara indrindra dia lavitra!
Soso-kevitra 4: Assemble your travel documents is part of plan a journey to Europe
Raha toa ka tsy manana pasipaoro, dia tsara indrindra mahazo famoretana! Dia haka efatra, fara fahakeliny, ny iray volana sy tapany nanomboka tamin'ny andron'i fangatahana ho anareo ny handray ny iray. (Miankina amin'ny inona no firenena no miaina ao anatin'ny mazava ho azy) Expedited tolotra dia afaka hanafainganana ny dingana, fa ho lany ianao. Tena tsara indrindra mba hikarakara tsara izany mialoha eo anoloan'ny diany. Efa manana pasipaoro? Hamarino ny lany daty! Firenena sasany dia afaka handà Anao teny Tapitra raha ao 6 volana rehefa tonga. Eek!
Soso-kevitra 5: Fanofana fiara.
te manofa fiara rehefa manomana ny diany ho any Eoropa? Aza adino ny manana fahazoan-dalana manan-kery ny mpamily. Fanofana fiara sasany orinasa mitaky ihany koa ny mpandeha mba manana ny fahazoan-dàlana mpamily iraisam-pirenena ankoatra ny mpamily ny fahazoan-dalana avy any amin'ny firenena niaviany.
Ny tapakila Strasbourg mankany Paris
Soso-kevitra 6: Aza ny-entana ny faritany haleha izy amin'ny toerana be loatra.
Araka ny voalaza eo anatrehan'i, fa mora ny manao ary miezaka ny famihinana in be loatra. Tena tanteraka takarina. Ny fialan-tsasatra sarobidy tokony ampiasaina tsara, noho izany dia mora ny miezaka ny-entana ny itineraries rehefa mieritreritra ny nankany Eoropa. Na izany aza, izany dia afaka ny ho lafo vidy (tsy lazaina intsony mandreraka), toy ny-nampirina entana nivezivezy amin'ny toerana be loatra amin'ny andro vitsy loatra mitarika ho amin'ny fotoana bebe kokoa eny an-dalana, sy ny maro hafa, na mandatsa-dranomaso fiaran-dalamby tapakila. Amin'ny toe-javatra tafahoatra, dia mety nanelingelina ny diany, mamadika izany ho nanjavozavo ny zavatra nosoratany ny hotely maso-ins sy hanamarina-outs (amin'ny fonosana sy tsy tapaka unpacking), teo am-pijerena ny tsy-nitsidika tontolon'ny hazakazaka lasa ny fiaran-dalamby varavarankely. Raha azo atao, moramora. ianao afa-tsy amin'ny fitaterana sy hahazo fotoana bebe kokoa mba hijery ny toerana.
Brussels mankany Rotterdam tapakila fiaran-dalamby
Tapakila Fiaran-dalamby ao Antwerp mankany Rotterdam
Mahazo tapakila fiaran-dalamby any Rotterdam any Berlin
Tapakila fiaran-dalamby any Rotterdam any Paris
Soso-kevitra 7: Money Exchange
Mpandeha lany vola be fividianana euro avy amin'ny banky (na mbola ratsy kokoa, avy amin'ny fanakalozam-bola MediaWiki) alohan'ny tonga any Eoropa. Izany dia hiteraka goavana sarany! so don’t neglect this subject when you plan a trip to Europe.
Ny toro-hevitra dia ny lohan'ny niaraka tamin'izay any amin'ny iray ATM rehefa tonga tany Eoropa, ary hiala vola mampiasa ny ATM karatra. Tena tsotra, ary ny tahan'ny fifanakalozana izay azonao noho ny raharaham-barotra dia saika azo antoka fa tsara lavitra noho ny tahan'ny izahay avy any an-trano na dia nahazo banky. Antsoy ny banky eo anatrehanao miala hanontany momba ny ATM barotra iraisam-pirenena saram, ary koa ny nampahafantatra azy ireo fa ianao dia mampiasa ny karatra any ivelany. Raha tsy lazao aminy, dia mety mampitandrina azy ireo mihevitra fa hosoka, ary hanakana ny karatra. koa, manontany raha toa ny banky manana toerana iraisam-pirenena na ny fiaraha-miasa amin'ny an-toerana banky any Eoropa.
Frankfurt mankany Cologne Train tapakila
Brussels mankany Cologne fiaran-dalamby tapakila
Vienna to Cologne Train tapakila
Stuttgart mankany Cologne Train tapakila
Soso-kevitra 8: Inona no very eo amin'ny nitaredretra, no mandresy eo amin'ny roundabouts
Aza sorona ny toerana ho an'ny trano fandraisam-bahiny kely tahiry. izahay manome fahazoan-dalana hidirana ny Airbnb safidin'ny na ny trano fandraisam-bahiny sy ny toerana afovoany indrindra rehefa manomana ny diany ho any Eoropa. Budget mpandeha, manokana, manana fironana hifidy trano fandraisam-bahiny ao amin'ny toerana lavitra izany € 5 mora kokoa noho ny iray izany foibe kokoa. ianao afa-tsy fotoana ary ny vola ao amin'ny fitaterana (indrindra fa raha rivotra ka naka taxi).
Zurich mankany Basel Train tapakila
Bern to Basel Train tapakila
Tapakila fiaran-dalamby Basel to Genewa
Soso-kevitra 9: Don’t forget to call your phone carrier before you plan a journey to europe
Antsoy ny mitondra Rehefa feno ny hanaovana drafitra ny nankany Eoropa sy hahazo drafitra IF kasainao hampiasaina ny finday, ary avy eo dia ho azo antoka no nanangana ny finday mba tsy nahy angon-drakitra fiampangana (in fohy: vonoy finday tahirin-kevitra sy hametra ny isan'ny fampiharana finday izay afaka mampiasa tahirin-kevitra). ary, amin'ny maha-drafitra, hikambana amin'ny hanafaka Wi-Fi ho an'ny downloading tambajotra ka naniraka mailaka, -maso sy ny fampiasana ny Web Apps. Eoropa maro Wifi toerana mafampana, ka dia tsy ho avy amin'ny mifandray ela. -tsy izany, mividy karatra SIM ho an'ny finday rehefa mahazo any Eoropa.
Tapakila fiaran-dalamby any Rimini a Milan
Roma mankany amin'ny tapakilan'ny lamasinina Florence
Tapakila fiaran-dalamby ao Turin mankany Milan
Tapakila fiaran-dalamby any Venise ho any Milan
Soso-kevitra 10: Misy An App ny ho amin'izany
Eightydays is an awesome travel app that can help you plan a trip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when mandeha manerana an'i Eoropa.
Users manomboka ny maka ny tanàna mba hanomboka sy mahavita in (amin'izao fotoana izao, fa ilaina ny hanomboka sy hifarana ilay dia ao amin 'ny toerana). Dia lasa mifidy daty, mandra-pahoviana ny diany ho sy ny maro toerana mampiditra. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ihany koa raha te-hijery tanàn-dehibe any Eoropa, ny Vondrona Eoropeana, na fotsiny ny Schengen Zone. Dia avy eo ny fampiharana ny hamorona faritany haleha izy, tanteraka tamin'i Airbnb tahan'ny amin'ny isan-tanàna, ho an'ireo eo amin'ny teti-bola.
Tena azo atao ny hanohy shuffling safidy mandra-fampiharana tafintohina eo ny faritany haleha izy izay toa tsara. Ary aza manahy ny manahirana mandeha: The site says izany mazava tsara lavitra-tsimparifary avy any seranam-piaramanidina and early morning departures that can drain travelers on the road.
Na dia tsy (nefa) rafitra tonga lafatra ho an'ny famandrihana iray manontolo Eoropa diany, Eightydays dia afaka manampy tsara kokoa mpandeha manome hevitra ny teboka bidy ho an'ny hafa raha mety nandehanany fampidirana azy ireo ny toerana dia mety tsy manana aloha heverina.
Travlelers can use ny Eightydays tranonkala or the newly launched iOS App to plan their European voyages.
Lyon to London Train Train
Amsterdam mankany amin'ny fiaran-dalamby Antwerp
Brussels mankany Frankfurt lamasinina
Brussels mankany Mainz lamasinina Mainz
Mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra mba handeha foana lamasinina! Vonjeo ny Train no fomba tsara indrindra mba hividy ny tapakila. Raha toa ka momba ny boky ny lamasinina tapakila tsindrio ny rohy https://www.saveatrain.com mba hahazo fihenam-bidy lehibe.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/plan-trip-europe/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary afaka manova ny /fr mba /na /de sy fiteny maro.
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys fiaran-dalamby soso-kevitra Travel traveltips